पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राप्रपा पुनर्गठनमा लागे, भयाे यस्ताे छलफल ?
चैत ५, झापा ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पुनगर्ठन गर्ने अभियानमा सक्रिय बनेका छन् । यसैक्रममा उनले आइतबार साँझ झापामा राप्रपाका विभिन्न तीनवटा गुटका ९ जना नेतालाई बोलाएर सामुहिक छलफल गरेका छन् ।
झापा आएका पूर्वराजासँग पार्टी पुनगर्ठनबारे छलफल गर्न राप्रपाका विभिन्न गुटका नेताहरु काठमाडौंबाट आइतबार साँझ चियाबगानमा आइपुगेका थिए । बेलुका ४ बजेदेखि साँझ ७ बजेसम्म चलेको छलफलमा सहभागी नेताहरुलाई पूर्वराजाले चिया र बिस्कुट खुवाएर पठाएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।
राप्रपाका तीनवटै गुटका तीन/तीनजना गरी ९ जना नेताहरुसँग पूर्वराजाले सामुहिकरुपमा तीन घण्टासम्म छलफल गरेको जिल्लास्थित सरकारी गुप्तचर स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो ।
पूर्वराजाको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो- ‘म धेरैतिर जाँदा पार्टी फुटेको गुनासो गर्छन्, यसले गर्दा कमजोर भयो, अब एउटा टार्गेट बनाएर तपाईहरु अगाडि बढ्नोस् ।’
पूर्वराजासँग भएको भेटबारे हामीले सहभागीमध्येका एक नेतालाई सोध्यौं । उनले भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे । भेटका क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राप्रपाका सबै समूहहरु एक हुनुपर्ने र पार्टी पुनर्गठन गरिनुपर्ने निर्देशन दिएको उनले बताए ।
पूर्वराजाको भनाइ उधृत गर्दै स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो- ‘म धेरैतिर जाँदा पार्टी फुटेको गुनासो गर्छन्, यसले गर्दा कमजोर भयो, अब एउटा टार्गेट बनाएर तपाईहरु अगाडि बढ्नोस् ।’
पूर्वराजासँगको भेटमा राप्रपाका तीनवटै गुटका नेताहरुले आ-आफ्नो पार्टीको शीर्ष नेतृत्वको आलोचना गरेका थिए । ठूला नेतावीच जुँगाको लडाइँ चलेका कारण पार्टी फुटेको र चुनावमा पराजय व्यहोर्नुपरेको नेताहरुले पूर्वराजालाई गुनासो सुनाएका थिए ।
यही रणनीतिअनुसार पूर्वराजाको आशिर्वाद थापेर राप्रपाका नेताहरु आज काठमाडौं फर्किएको स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दियो । अब ज्ञानेन्द्रसँगको छलफलअनुसार तीनवटै पार्टीमा मुख्य नेतृत्वविरुद्ध विद्रोहको तयारी थालिने स्रोतको दाबी छ ।
यसैवीच पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले झापामा रहँदा प्रदेश १ का राप्रपाका नेताहरुसँग पनि राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम जारी रहेको स्रोतले बतायो ।
टिप्पणीः असफल ज्ञानेन्द्रको राजनीतिक चासो !
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरीको बिहेको निम्तो मान्दै शीतलनिवास पुगेर पूर्वराजाले गणतन्त्रलाई भावनात्मक रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । यद्यपि त्यसपछिका आफ्ना अभिव्यक्तिहरुमा भने उनले ‘अब समय आयो’ भन्ने गरेका छन् । उनका यी दुई व्यवहार एकापसमा ‘कन्ट्रोभर्सियल’ देखिन्छन् ।
संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान बनिसकेर चुनावहरु पनि भईवरि मुुलुकले राजनीतिक स्थायित्व पाइसकेको छ । यस्तो बेलामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको संरक्षकत्वमा पुनर्गठन हुने राप्रपाले राजतन्त्र फर्काउने नीति लिन्छ या लोकतान्त्रिक अभ्यासमै रहेर राजनीतिक गतिविधि गर्छ ? यो प्रश्न चासोको विषय बन्ने गरेको छ नेपाली राजनीतिमा ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग राजनीतिक सुझबुझ र कला नभएकाले उनले चाहँदैमा नेपालमा तत्कालै ‘कन्जरभेटिभ’ फोर्सको पुनरुत्थान सहज देखिँदैन । त्यसैले उनी आफैं राजनीतिको मैदानमा उत्रिए पनि परिस्थिति पछाडि फर्किएला भनेर अनुमान लगाउन राप्रपाकै नेताले समेत सकेका छैनन् । अनलाइन खबरबाट